Nzaghachi Archives - Okwu Ugbu a
Jizọs "akụkọ ifo"
Ihe na August 12, 2021 August 14, 2021 by Mark
nke Yongsung Kim dere
A iriba-ama n'ụlọ State Capitol dị na Illinois, USA, nke pụtara nke ọma n'ihu ngosi ekeresimesi, gụọ:
N'oge oyi solstice, ka e jiri ya mee ihe. E nweghị chi dị iche iche, mmụọ ọjọọ adịghị, ndị mmụọ ozi, eluigwe ma ọ bụ hel. Enwere naanị ụwa anyị. Okpukpe bụ naanị akụkọ ifo na nkwenkwe ụgha na-eme ka obi sie ike ma na-eme ka ndị ohu. -nydailynews.com, Disemba 23rd, 2009
Ufodi ndi n’aga n’ihu g’enwe ka anyi kwere na akuko banyere ekeresimesi bu akuko. Na ọnwụ na mbilite n’ọnwụ nke Jizọs Kraịst, nrigo ya n’eluigwe, na ọbịbịa ya nke ugboro abụọ bụ nanị akụkọ ifo. Na Chọọchị bụ ụlọ ọrụ mmadụ nke ndị mmadụ wuru iji mee uche nke ụmụ nwoke na-esighị ike, ma weta usoro nkwenkwe ndị na-achịkwa ma gọnarị ụmụ mmadụ maka nnwere onwe n'ezie.
Kwuo, n'ihi arụmụka, na onye dere akara a ziri ezi. Na Kraịst bụ ụgha, Katọlik bụ akụkọ ifo, olileanya nke Iso Ụzọ Kraịst bụ akụkọ ifo. Mgbe ahụ ka m kwuo nke a…
Nginggbanwe Omenala Anyị
Ihe na October 16, 2017 October 16, 2017 by Mark
Ihe omimi Rose, nke Tianna (Mallett) Williams dere
IT bụ ahihia ikpeazu. Mgbe m gụrụ nkọwa nke usoro ihe osise ohuru ulo oru na Netflix nke na-eme ka umuaka nwee mmekorita, kagbuo ndenye aha m. Ee, ha nwere ezigbo akwụkwọ akụkọ anyị ga - echefu… Mana akụkụ ya Pụ na Babilọn pụtara ịhọrọ nhọrọ na n'ụzọ nkịtị gụnyere isonye ma ọ bụ kwado sistemu nke na-emebi omenaala. Dị ka ọ na-ekwu na Abụ Ọma 1:Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Debuning Sun suncle Skeptics
Ihe na October 14, 2017 October 14, 2017 by Mark
Ebe nkiri si 13bọchị nke isii
THE mmiri zoro n’ala ma mee ka ìgwè mmadụ gbaa ya mmiri. Ọ ga-abụrịrị na ọ bụ ihe mkpali nye nkọwa ịkwa emo nke jupụtara n'akwụkwọ akụkọ ụwa ọnwa ole na ole gara aga. Shepherdmụaka ọzụzụ aturu atọ na Fatima, Portugal kwuru na ọrụ ebube ga-eme n'ọhịa Cova da Ira na ehihie dị elu ụbọchị ahụ. Ọ bụ n’abalị iri na atọ nke ọnwa Ọktoba, n’afọ 13. Ihe ruru mmadụ 1917, 30 rue 000, 100 gbakọtara iji gbaa ya àmà.
N'etiti ha, ndị kwere ekwe na ndị na-ekweghị ekwe, ụmụ nwanyị ochie na-eme nsọ nsọ na ndị na-akwa emo. - Fr. John De Marchi, Onye ụkọchukwu Italy na onye nyocha; Obi nke N'aburo, 1952
Ihe na July 17, 2017 July 17, 2017 by Mark
E bipụtara ya na Machị 25, 2010.
IHE ọtụtụ iri afọ ugbu a, dị ka m kwuru na Mgbe Ọchịchị machibidoro ụmụaka iwu, Ndị Katọlik aghaghị ịnagide akụkọ na-enweghị ngwụcha nke akụkọ na-ekwupụta akụkọ ọjọọ mgbe ihere mechara nchụ-aja. “Ebubo Prikọchukwu…”, “Kpuchie Ekpere”, “Akpọrọ Onye Nmejọ Ihe Site na Parish Gaa parish…” wee gaba n'ihu. Ọ na-agbawa obi, ọ bụghị naanị nye ndị nkịtị, kama ọ bụ ndị nchụaja ibe. Ọ bụ oke mmetọ nke ike sitere n'aka nwoke na persona Christi—na onye nke Kraist—Nke na-ahapụkarị onye ahụ na nkịtị, na-anwa ịghọta nke a abụghị naanị obere okwu ebe a na ebe ahụ, kama ọ bụ ọnụọgụ nke karịrị nke mbụ echere.
N'ihi ya, okwukwe dị ka nke a ghọrọ ihe a na-apụghị ikwenye ekwenye, Chọọchị enweghịzi ike iwepụta onwe ya dị ka onye nkwusa nke Onyenwe anyị. —POPE BENEDICT XVI, Ìhè nke ,wa, Mkparịta ụka Peter Seewald, p. 25
Na Charlie Johnston
Ihe na March 28, 2017 April 17, 2017 by Mark
Jizọs Na-eje Ije na Mmiri nke Michael D. O'Brien dere
EBE AHỤ bu isi okwu m n’acho igbachi akuku nile nke ozi m: Atụla egwu! N'ihi na ọ na-eburu n'ime ya mkpụrụ nke eziokwu na olileanya:
Ihe na April 10, 2015 April 17, 2017 by Mark
NDỊ a Lent gara aga bụụrụ m ngọzi maka njem mụ na ọtụtụ iri puku ndị ụkọchukwu na ndị nkịtị nọ n'akụkụ ụwa niile site na ntụgharị uche Mass kwa ụbọchị m dere. Ọ na-atọ ụtọ ma na-agwụ ike n'otu oge ahụ. Dịka otua, achọrọ m iwepụta nwa oge iji tụgharịa-uche ọtụtụ ihe n’ozi m na njem nke m, na ntuzi-aka nke Chineke na-akpọ m.
Chineke ọ dighi mbilee?
Ihe na July 11, 2013 April 17, 2017 by Mark
Chineke gbaghara USA. Dika aga m ebido site na Chukwu gozie USA, mana taa kedu ka onye obula n'ime anyi ga-esi rio ya ka O gozie ihe na-eme ebe a? Anyị bi n’ụwa nke gbara ọchịchịrị na-agba ọchịchịrị. Ìhè nke ịhụnanya na-anyụ oyi, ọ na-ewe ike m niile ime ka obere ire ọkụ a na-enwu n’obi m. Ma maka Jizọs, ana m eme ka ọ na-enwu. Ana m ario Chukwu Nna anyi ka o nyere m aka ighota, na ichoputa ihe na eme na uwa a, ma O noro na nkiti. Ana m ele ndị amụma ahụ tụkwasịrị obi n'oge a anya nke m kwenyere na ha na-ekwu eziokwu; gị, na ndị ọzọ ndị m ga-agụ blọgụ ha na ihe ha dere kwa ụbọchị maka ike na amamihe na agbamume. Ma unu niile agbaala nkịtị. Ozi ndị ga-apụta kwa ụbọchị, tụgharịa na kwa izu, na kwa ọnwa, na ọbụlagodi n'ọnọdụ ụfọdụ kwa afọ. Chineke ọ kwụsịrị ịgwa anyị niile? Chineke agbanwewo ihu Ya di nsọ n’ebe anyi nọ? Ka emechara, kedu ụdị nsọ Ya zuru oke ga-enwe ike ile mmehie anyị anya…?
Ihe na April 29, 2010 November 27, 2020 by Mark
IN mgbanwe akwụkwọ ozi n'oge na-adịbeghị anya, onye na-ekweghị na Chineke gwara m,
Ọ bụrụ na e gosi m ihe akaebe zuru oke, m ga-amalite ịgba àmà banyere Jizọs echi. Amaghị m ihe akaebe ahụ ga-abụ, mana ejiri m n’aka na chi niile dị ike, maara ihe niile dịka Yahweh ga-ama ihe ọ ga-ewe iji mee m ikwere. Nke ahụ pụtara na Yahweh agaghị achọ ka m kwere (opekata mpe n'oge a), ma ọ bụghị na Yahweh nwere ike igosi m ihe akaebe.
O bu na Chukwu achoghi ka onye ekweghi na nke a kwenye n’oge a, ka obu na onye n’enweghi ekwenye n’onwe ya adighi njikere ikwere na Chukwu? Nke ahụ pụtara, ọ na-etinye ụkpụrụ nke "usoro sayensị" na Onye Okike n'onwe Ya?Gaa n'ihu Ọgụgụ →
A Irony Irony
Ihe na April 27, 2010 Nwere ike 24, 2017 by Mark
I ejiriwo izu ụka na ụka ekweghị na Chineke kwurịtara ụka. O nwere ike ịbụ na ọ dịghị mmega ahụ ka mma iji wulite okwukwe mmadụ. Ihe kpatara ya bụ na enweghi uche bụ ihe ịrịba ama n'onwe ya nke ejiri ike karịrị nke mmadụ, n'ihi na mgbagwoju anya na ikpu ìsì ime mmụọ bụ njirimara nke onye isi ọchịchịrị. Enwere ụfọdụ ihe omimi nke ekweghị na Chineke enweghị ike idozi, ajụjụ ndị ọ na-enweghị ike ịza, na akụkụ ụfọdụ nke ndụ mmadụ na mmalite nke ụwa na-enweghị ike ịkọwapụta ya na sayensị nanị. Ma nke a ka ọ ga-agọnahụ site na ileghara isiokwu ahụ anya, ibelata ajụjụ dị n'aka ya, ma ọ bụ ileghara ndị ọkà mmụta sayensị anya bụ́ ndị na-agọnarị ọnọdụ ya ma na-ehotakwa nanị ndị mere ya. Ọ na-ahapụ ọtụtụ na-egbu mgbu asịrị n'ihi “echiche” ya.
Ezigbo Onye Na-ekweghị na Chineke
Ihe na April 10, 2010 April 17, 2017 by Mark
Philip Pullman; Foto: Phil Fisk maka Sunday Telegraph
M AWOKE na 5:30 nke ụtụtụ a, ifufe na-ebe ákwá, snow na-ada. Oke mmiri ozuzo mara mma. N’ihi ya, m wụsara uwe mgbokwasị na okpu, ma pụọ ​​n’oké ifufe ahụ wee zọpụta Nessa, bụ́ ehi anyị nwere mmiri ara ehi. Na ya na nchekwa n'ọba, na uche m na-eteta n'ụra, agagharịrị m n'ụlọ iji chọta isiokwu na-adọrọ mmasị site n'aka onye na-ekweghị na Chineke, Philip Pullman.
Site na ọnya nke onye na-ewe ule n'oge gboo mgbe ụmụ akwụkwọ ibe ya ga-anọgide na-agba ọsụsọ na azịza ha, Maazị Pullman na-akọwa nkenke etu o si hapụ akụkọ ifo nke Iso forzọ Kraịst maka ezi uche nke ekweghị na Chineke. Ihe kacha masị m bụ, ọ bụ azịza ya nye mmadụ ole na ole ga-arụ ụka na ịdị adị Kraịst pụtara ìhè, n’akụkụ ụfọdụ, site n’ezi ihe Churchka Ya meworo:
Mana, ndị na-eji arụrịta ụka ahụ dị ka ha na-egosi na rue mgbe ụka gara aga ọ dịghị onye matara etu esi adị mma, na ọ nweghị onye nwere ike ime ihe ọma ugbua belụsọ ma ha mere ya maka ebumnuche nke okwukwe. Ekwetaghị m nke ahụ. --Philip Pullman, Philip Pullman na Ezi Nwoke Jesus & The Scoundrel Christ, www.telegraph.co.uk, Eprel 9th, 2010
Mana isi okwu a dị mgbagwoju anya, ma n'eziokwu, na-eweta ajụjụ dị oke mkpa: enwere ike inwe 'ezigbo' onye na-ekweghị na Chineke?